Topi-pandrika Kn95, saron-tànana fiarovana N95, mason-koditra azo alaina - Felix
KN95 sarontava fiarovana
Topy fiarovana fiarovana N95
Kn95 dia saron-tava mahazatra sinoa. Kn95 respirator dia karazana respirator manana fahombiazan'ny filtration particle ao amin'ny firenentsika. Ny mason-tsika Kn95 sy ny mason'ny N95 dia tena mitovy amin'ny lafiny fahombiazan'ny filtration zato.
Ny saron-tava azo ampiasaina dia vita amin'ny lamba mihoatra ny telo amin'ny lamba tsy roa vita amin'ny 28g; Ny orona dia vita amin'ny plastika tontolo iainana ny plastika plastika rehetra, tsy misy metaly, miaraka amin'ny fitrandrahana masika (mason-drongony fandidiana fitsaboana) dia afaka misoroka ny fihanaky ny taovam-pisefoana amin'ny lafiny sasany, ary tsy afaka misakana ny setroka.
KN95 mask 5 sosona
KN95 mask 4 sosona
Masedà fitsaboana madiodio amin'ny sosona 3 sy kitapo 10 / kitapo
Topy fiarovana fiarovana N95 izay nohamafisin'ny FDA CE
Ny orinasanay dia naorina tamin'ny 2005, dia famokarana R&D matihanina sy varotra ny Notebook, fanamarihana mivaingana, lahatahiry rakitra, poketra tanana, hoditra hoditra, fitaovana PPE sns. Eto amin'ny tanànan'i Shenzhen izahay ary manana fitrandrahana fitaterana mora foana. Hatramin'izao, manana ekipa efa mihoatra ny 300 izahay sy am-polony traikefa amin'ny varotra vahiny, nafindra any Eropa, Amerika Atsimo, Australia, Afrika ary Azia ny vokatrao.
Tsy maninona na inona vokatra, hanomboka amin'ny fividianana akora, hatramin'ny famokarana vokatra, ny fonosana sy ny fandefasana, ny fanadiovana ny fomba amam-panao ary miala amin'ny seranana, ny fepetra tsirairay dia voafehin'ny matihanina, mba hahazoana antoka fa mety tsara ny entana ka tonga amin'ny mpanjifa amin'ny fotoana.
Fahalalana fiarovana miaro-tena
Ny fahalalana fiarovana ny aretim-pon'ny olona sasany dia efa ho avy na handeha hiasa, amin'ny fipoahana ankehitriny tokony hatao? 1. Ahoana ny fomba fitafy mason-drongony fandidiana vita amin'ny làlan-kaleha.Try tsy mitondra fitateram-bahoaka, dia asaina mandeha, bisikileta na mitondra fiara tsy miankina ianao, fiara fitateram-bahoaka handeha hiasa.Raha toa anao m ...
Mba handresena an'io aretina sy fisorohana io valan'aretina io, ny hevi-dehibe dia ny "fisorohana"
Mba hialana amin'ny fisorohana ity valan'aretina ity dia ny fisorohana. Ny OMS dia nanambara ny valanaretina pnemonia amin'ny coronavirus amin'ny alàlan'ny «pélikaly». Nahasarika olona an-tapitrisany eran-tany ny saron-tava madinika. Ao ambadiky ny mason-jaza kely dia rojo ny famokarana sy ny famokarana ary ...
Mpamatsy saron-tava amin'ny mason-tsarintany an'i Shina
Address: No.302 Lalana Guiyue, Guanlan